I-Trendy Johannesburg Loft (i-WiFi ne-Netflix) - I-Airbnb
I-Trendy Johannesburg Loft (i-WiFi ne-Netflix)
314 okushiwo abanye
Johannesburg , Gauteng, iNingizimu Afrika
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Thobi
U-Thobi Ungumbungazi ovelele
Thola i-loft yangempela yokuhlala eGoli. Konke ukusebenzisa ngobungcweti isikhala nedizayini, ethuthukiswa ngobuningi besikhala sewindi, ukuthungwa okufudumele kanye nenala yokukhanya kwemvelo.
I-Space yethu iyipulani elivulekile lesimanje elinefenisha ephelele ebheke phezulu enkabeni yeGoli. Uphahla lwethu lwamapulangwe silwenzile ukuze sidale umuzwa wezimboni ze-rustic. Ifulethi elingaphezulu libheka amasimu aluhlaza omphakathi.
Senze isiqiniseko sokuthi sihlanza indawo yazo zonke izihambeli esizihlalise. Futhi isibulali magciwane sizohlinzekwa isivakashi esizosisebenzisa ngesikhathi sokuhlala kwaso.
4.75 out of 5 stars from 314 reviews
4.75 · 314 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-314
Ukujikijelwa kwetshe kude nendawo empompayo yase-44 Stanley. Leli fulethi liseduze nemizila emikhulu yezokuthutha futhi ibanga lokuhamba ngezinyawo i-UJ kanye nekhempasi yase-Wits. Eduze kakhulu nesiteshi iGautrain esiholela esikhumulweni sezindiza nakwezinye izindawo ngaphakathi kwedolobha.
I-Lofts iyingxenye ye-Braamfontein Lifestyle.
Sithanda ukuzijabulisa nokuhlangana nezivakashi noma ngabe ngubani esifuna uzizwe usekhaya ukuze uphumule futhi ukhululeke. Uma kwenzeka ungathanda ukuhlangana, sicela usithumelele umlayezo.
UThobi Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Johannesburg namaphethelo